SAP Business ByDesign User များအတွက် Covid 19 အခြေအနေ၌ အသုံးပြုလို့ရသည့် Function များ - Vanguard
Home » SAP Business ByDesign User များအတွက် Covid 19 အခြေအနေ၌ အသုံးပြုလို့ရသည့် Function များ
Posted by Vanguard on April 20, 2020 .
ယခုအခါနိုင်ငံများသည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာ များကိုကျင့် သုံးနေကြပါသည်။ ယခုလို အခြေအနေတွင် ကျွန်တော်တို့ သည် လူအများစုအတွက် အိမ်မှ အလုပ် လုပ်ခြင်းဖြင့် social distancing ကို လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ ဤခက်ခဲသောအချိန်များအတွက် SAP Business ByDesign Cloud ERP သည်အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းသုံးsolution တစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။
အချိန် model များနှင့် planning များလုပ်ခြင်း
လက်ရှိအခြေအနေတွင် အောက်ပါအရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို SAP Business ByDeisgn တွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အချို့ နိုင်ငံတွင် အလုပ်ချိန် ကို လျော့ချ ခြင်း (သို့) Flexible Working Hours စနစ် ကိုပြောင်းလဲအသုံး ပြု ကြ ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲရန်SAP Business ByDesign သည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် setting အနည်းငယ်သာ ပြု လုပ် ရန် လိုအပ်ပါ သည်။
Printer Output အပြင်အဆင်များနှင့် print queues
အကယ်၍သင်သည်ရုံး၏စာရွက်စာတမ်းများကို အိမ်မှ print ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါက SAP Business ByDesign တွင်ပါဝင်သော printer output နှင့် print queues ချိန်ညှိမှုများကိုသုံး၍ မိမိလုပ်ငန်းအား အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ရေတို liquidity အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
Liquidity ကြပ်တည်းမှုဖြစ်ခဲ့သော် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် SAP Business ByDesign ကိုသုံး၍ လိုအပ်သော data များကို စီမံနိုင်ပါသည်။ ဤစနစ်မှရရှိမည့် data များသည် သင့်လုပ်ငန်း ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့် လက်တွေ့ကျသော စီမံချက်များဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရရှိလာမည့် data များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်အကဲခတ်နိုင်ပြီး ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုလဲ (အရေးပေါ်အနေအထားများသာလျှင်မက) အမြဲသဖြင့်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ် ကုန် စာရင်းပိတ် ခြင်း
ယခုချိန်တွင်သင်သည်နှစ်ကုန်စာရင်းပိတ် ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ချိန်ရှိပါသေးသည်။SAP Business ByDesign တွင် နှစ်အလိုက်ဘဏ္ဍာရေးကို မှန်ကန်စွာစာရင်းပိတ်ထားနိုင်ခြင်းသည်လည်း အလွန်အရေးပါပါ သည်။
သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် customized dashboard ကိုသင်လိုအပ်နေပါသလား? SAP Business ByDesign တွင်ပါရှိသော Reporting၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသုံးပြ၍ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော Key Performance Indicator (KPIs) နှင့် တုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသော dashboard များ ကို တည်ဆောက်နိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေးအတွက် အရေးပါသော တိုင်းတာမှုများတွင် ပို၍ ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုလိုအချိန်မျိုးတွင် အိမ်မှ အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ SAP Business ByDesign ကတော့ ထိုကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရန်နှင့် ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ယခုလိုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းများရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးအချက်အခြာကို သေချာစွာ စီမံနိုင်ခြင်းဖြင့် ခက်ခဲသောယခုလိုအချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး အကျိုးရလာဒ်များကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။